‘Tokoloshi ndeyangu’ | Kwayedza
12 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-11T07:34:16+00:00 2018-10-12T00:04:54+00:00 0 Views
Svondo rapera murume nemudzimai wake ava vakazopotera kuKwayedza vachiti “zvinhu zviya zvatonyanya”. Vanoti vava kuona n’anga yekuZambia uko kwavakanotora mishonga yakaipa ichivatevera kwose kwavanoenda ichitaura navo apo inenge yakapfeka mbatya dzavakaiwana yakapfeka pavakaendako.
VaNyakundivenga nemudzimai wavo —avo vanova ndivo vakanomhan’arira Madzibaba Steven kwaMambo Chireya vachida kuti vayananiswe pakuti madzibaba uyu abvise mhiko dzake – vanoti svondo rapera paseri vakazoenda kudare uko vakanosandura mashoko avo vachizviti ndivo varoyi.
VaNyakundivenga nemudzimai wavo vakauya kumahofisi eKwayedza svondo rakapera vachiti: “Taingoramba nyaya yatinoziva nekuda kwekuti taitya kurohwa nehama dzedu kuti takanoromba kuZambia.
“Takazoenda kudare ramambo taona kuti zvakanaka kutaura chokwadi nekuda kwematambudziko atava kusangana nawo pane kusvibisa munhu asina mhosva. Pekutanga takatya kudura kuti takanotora huroyi kun’anga yekuZambia.
“Mambo ndakavaudza kuti zvose zvataitaura manyepo, taingopomera madzibaba nyaya isipo. Chokwadi ndechekuti vakangotiitira go back to sender mishonga yedu ichibva yatipandukira.
VaNyakundivenga vanoti vakanokumbira ruregerero kudare ramambo ndokunzi vadzokere kubepanhau rino nekunaMadzibaba Steven vachireurura. “Mambo vakatiti tidzokere kumba vozotipa tsamba yekudzokera nayo kwaMadzibaba Steven avo vasina kuuya kudare iri.
“Tinokumbirawo imi veKwayedza kuti mutiperekedze kwamadzibaba nekuti takataura navo panhare vakati tidzoke kwamuri kwatakambomhanyira,” vanodaro VaNyakundivenga.
Vanoti musi wavakaenda kudare ramambo, vakaperekedzwa nechinhu chaiita sen’anga yekuZambia icho chaingoridza tsamwa ndokubva chasvikomirira kunze kwemusha wamambo.
Vapedza namambo, vanodaro, chin’anga chiye chakadzokera navo kunosvika pamusha pavo chichibva chanyangarika.
“Tichitarisa kuZambia nekuGokwe, tinofunga kuti n’anga iyi iri kutumira zvidhoma zvayo kana kuti chava chipoko chayo nekuti hatizive kuti imhenyu here kana kuti yakafa,” vanodaro.
Vanoti pose pavanoona n’anga iyi, inenge ichitaura kuti vakatora mishonga yayo vakasanganisa nemiteuro izvo zvave kuikanganisa upenyu hwayo nekudaro inoda kudzoserwa zvinhu zvayo.
Murume uyu nemudzimai wake vanoti vari kupera miviri kuita sekunge vanogara vachiyamwiwa ropa.
“Takatotiza pamusha ndokusiya vana vose kuhama neshamwari dzedu. Tinototya kudzokera kumusha uye hakuna munhu achada kutiona nekuda kwekunzi tiri varoyi,” vanodaro VaNyakundivenga.
Mai Machivenyika vanoti vakanyengerwa nemurume wavo kuti vanotora tokoloshi kuti vaite mari, asi zvakapanduka zvave kuita kuti vaoneswe nhamo nekuitwa bonde nevarume vavasingazive.
Mai Melody Machivenyika
“Inyaya yekuda mari, tingadai tisina kuita izvi. Takatengesa mombe zhinji kuti tiende kun’anga iyi asi nhasi zvatipandukira, apa hakuna kubudirira kwataita, tinongori varombo.
“Musha waparara, iye murume handichambonzwa kumuda, iyewo haadi kundiona sezvo ava kudanana netutokoloshi,” vanodaro.
VaNyakundivenga vanoti vari kufunga zvekuzviuraya nekuda kwenyaya iyi. Vanotizve vari kuda kunodzosera zvinhu izvi kun’anga yekuZambia asi havana mari yekufambisa neyekunoripa n’anga yacho kuti itambire zvinhu zvayo.
Mambo Chireya vanoti; “Taida kutonga Madzibaba Steven pano padare rangu nekuti mashavi evaroyi abude. Takazonzwa vanhu ava votaura mashura avo ekuteverwa nen’anga iyi vachizviti ndivo varoyi, vakanotora tokoloshi nemimwe mishonga kuZambia. “Ndakamirira kudzoka kwavo vose kuno tovayananisa semhuri.”
Kusvika pakadhindwa bepanhau rino, vemhuri yekwaNyakundivenga vainge vasati vadzokera kunaMadzibaba Steven kana kwamambo.